Zaridaina legioma: fanandramana sy naoty - ikkaro
firosoana >> zaridaina >> Patch legioma
Manana zaridaina aho ary eto avelako ireo zavatra mifandraika amin'izany. Fitaovana noforoniko, andrana, fambolena Tiorka, hifehezana ny bibikely sns.
Manazava ny zavatra ataoko aho ary raha mety amiko izany. Izay tiako hatao sy ireo fisalasalana izay tonga teny an-dalana ho kahie.
Miverina amin'ny lohahevitry ny composting aho avy amin'ny horonan-tsary hitako Charles dowding izay miorina amin'ny filozofia No Dig, No Dig (izay horesahintsika amin'ny lahatsoratra hafa). Ny zezika dia tsy mampiasa afa-tsy compost ao amin'ny zaridainany. Compost ho an'ny zava-drehetra. Ary mampianatra anao izy roa hamorona azy sy hampiasa azy io ary ho toy ny zavamaniry ary hikarakara ny zaridainanao.
Recipe de compost Misy am-polony, na dia mifototra amin'ny fitsipika iray aza ny rehetra fa samy manao azy amin'ny fombany avy.
Nahita sy namaky atiny mifandraika be dia be aho ary misy ny olona manandrana manafaingana izany faran'izay haingana mba hahamora ny fandehan-javatra, ny sasany manampy hena, na ny ambina sakafo masaka aza, saingy tsy hitako izany. Ny manampy hena dia toa fahadisoana amin'ity karazana lozam-pifamoivoizana aérobika ity, zavatra iray hafa dia ny fakana zezika avy amin'ny fako matanjaka an-tanàn-dehibe, toy ireo nangonina ao anaty fitoeram-pako, nefa mazàna dia vita amin'ny fizotran'ny anaerobika izany ary miresaka zavatra hafa tanteraka isika.
Cayenne, karazany hafa amin'ny Capsicum chinense Izy io dia iray amin'ireo masiaka fanta-daza sy be mpampiasa indrindra, angamba satria na dia mafana be aza izy dia zakain'ny ankamaroan'ny olona.
Manana anarana iraisana marobe izy io: cayenne, dipoà cayenne, dipoavatra mena, sakay.
Izy io dia manana 30.000 ka hatramin'ny 50.000 SHU ao amin'ny Mizana scoville.
Amin'izao fotoana izao Izy io no masiaka mifanentana amin'ny lanilaninay izay ao an-trano. Manome mangidihidy mahery nefa tsy atao be loatra. Ny hafa dia tia ny habanero efa mandeha mizana sy mangidihidy be izy ireo ary mpijinja karolinaTsy azo heverina ho fihinan'olombelona ry zareo, hahaha.
Amin'ity taona ity dia tadiaviko andramo ireo jalapenos.
El Carolina Reaper na Carolina Reaper no dipoavatra mafana indrindra manerantany tamin'ny 2013 miaraka amin'ny sandan'ny Units Scoville 2, na dia miovaova eo anelanelan'ny 220 sy 000 ny elanelam-potoana misy azy, miankina amin'ny ny ambaratonga scoville. Fahatezerana tena izy izay hahatonga azy io tsy azo hanina. Misy karazana spicier hafa toy ny Pepper X.
Izy io dia isan-karazany Capsicum chinense manokana ny HP22BNH azon'i Ed Currie avy amin'ny orinasa Orinasa Pepperert Pepper Company. Izy io dia lakroa ny sakay Habanero ary ny Naga Bhut Jolokia (izay saika hovidiko tamin'ity taona ity tao amin'ny akanin-jaza)
Ny refin'ny Scoville dia noforonin'i Willbur Scoville mba handrefesana ny hafanan'ny peppers mafana. Manombatombana ny habetsaky ny capsaicin, izay akora misy amin'ny zavamaniry ao amin'ny karazana Capsicum. Nanao izany tamin'ny alàlan'ny fitsapana Organoleptika izy izay nanandrana nanara-penitra sy nitady fomba hividianana vokatra samihafa. Na dia eo aza ny fetrany satria famakafakana organoleptika izay misy ny herin'ny olona sy ny fahatsapany ny lanilany, dia nandroso izany.
Androany (nanomboka tamin'ny 1980) dia ampiasaina ny fomba fandalinana habetsahana toy ny High Performance Liquid Chromatography (HPCL) izay mandrefy mivantana ny habetsahan'ny Capsaicin. Ireo fomba ireo dia mamerina ny soatoavina ao amin'ny "unit des pungency or hotness", izany hoe amin'ny ampahany iray amin'ny capsaicin isaky ny iray tapitrisa vovo-dipoavatra maina. Ny isan'ny singa vokarina dia ampitomboina amin'ny x15 hivadika ho vondrona Scoville. Tsy nilaina ny nankany Scoville fa mbola natao ho fanajana ny mahita azy io ary satria rafitra efa fantatry ny maro.
Ny karazany isan-karazany amin'ny karazany dia mety ahitana Capsaicin mihoatra na latsaka, fa na ny fomba fambolena sy / na ny tontolo iainana aza dia mety hamaritra fa ny sakay dia mafana na betsaka na dia iray karazana aza.
Izy io dia isan-karazany Capsicum chinense.
Ao anatin'ny habaneros dia misy karazany marobe koa
Voa sy germination
Ny voan'ny sakay sy sakay dia mety maharitra fotoana hitsimohany, indrindra raha tsy ampy ny maripana, fa raha apetratsika eo ambonin'ny 30 degre dia hataontsika mitsimoka eo anelanelan'ny 7 sy 14 andro dia hitsimoka ny masomboly ary hiseho ny cotyledons. .
Ao anaty chinense capsicum isika dia mahita karazana sakay isan-karazany. Ny malaza indrindra dia ny dipoavatra habañero, la cayenne, ny ají panca ary ny ají limo. Eto mandritra ny fotoana fohy dia hiresaka momba ireo Habanerosa isika izay itomboantsika.
Fomba fanamboarana kantina amin'ny voatavo
Hatramin'ny fahavaratra lasa dia maina iray voatavo (homme dipper) , heveriko fa homme dipper. Mitovy amin'ny voatavo mpivahiny, fa amin'ity endrika lava kokoa ity.
Ary tonga ny fotoana hanaovana zavatra miaraka aminy ;-)
Satria 1 ihany no notahiriziko dia te hampiasa azy io ho iray aho cantine hitondra rano. Ny fananganana azy dia tena tsotra. Mila manafoana azy fotsiny isika ary manala azy.
Ahoana ny fomba hanaovana composter an-trano miaraka amin'ny paleta
Nanomboka aho manaova compost ary efa nanao a tena mpanafika an-trano tena tsotra miaraka amina paleta. Mamela sary vitsivitsy sy fanamarihana kely aho mba hahitanao ny fomba nanatontosako azy ary amin'ny faran'ny lahatsoratra dia hahita maodely hafa vita amin'ny paleta ianao, maka tahaka ny fitoeran'ny zezika.
Mampiasa paleta taloha aho izay nampiasako tamin'ny olona na orinasa izay hanary azy ireo.
Ny habe izay nampiasako dia paleta Euro, ka efa fantatrao ny fandrefesana 1,20 × 0,8 m ka hananan'ny fotony 1m x 0,8m ny haavon'ny fitoeram-bokatra.